10 Andro Switzerland Travel faritany haleha izy | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Andro Switzerland Travel faritany haleha izy
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 31/12/2019)
Liana dia lavitra mahalala fa zava-dehibe ny ho tsara faritany haleha izy. Miaraka tsara sarintany jereo kely ny, ny mafy orina drafitry ny fitaterana, ary tena zava-dehibe, mahafinaritra asa - ianao ho an'ny ny 10 andro Soisa Travel. Ary rehefa mandeha ianao amin'ny alalan'ny Eoropa, ny fiaran-dalamby afaka hitondra anareo saika na aiza na aiza. Ireo izay maniry ny explorre Soisa mila manana drafitra, satria ny firenena dia feno mahatalanjona zava. Raha toa ka mila fanampiana na ny fitaomam-panahy miakatra miaraka amin'ny, andao mba jereo kely 10 andro Soisa Travel faritany haleha izy:
Day 1 ny 10 Andro Switzerland Travel faritany haleha izy – Geneva
Ny toerana manomboka ny diany dia mitovy, fa ihany koa no manomana ny mpamaky ho an'ny sisa ny fijanonany. Ny ankamaroan'ny mpandeha fahazoan-dalana nanomboka tamin'ny Geneva, na Zurich na tanàn-dehibe, satria ny fitaterana hubs. Inona koa, azonao atao ny manandrana faritany haleha izy io mihemotra raha te - inona no zava-dehibe dia ny hiala voly!
Raha tany ho eo an Geneva aloha, misy zavatra maro be ny mahita amin'ny andro voalohany tany Soisa. Dia mampiseho ny Old Town nitsidika sy ny City Center. Fanampin'izany, ny Treille Promenade sy ny Firenena Mikambana ihany koa ny fanaovam-panavotana zava lehibe.
Lyon ho Basel Lamasinina
Zurich ho Basel Lamasinina
Paris ho Basel Lamasinina
Lucerne ho Basel Lamasinina
Day 2 – Lake Geneva
Nanomboka tamin'ny Geneva manome anao fahafahana tsy manam-paharoa hifikitra manodidina Lake Geneva kely intsony. Fa andro faharoa tany Soisa, dia ho tsara hitsidika ny tanànan'i Montreux, maka toerana tsara eny akaikin'ny farihy.
It’s only a short mitaingina fiaran-dalamby niala Geneva, ary ilaina na tsia mahita. Inona koa, izay tia Moyen Âge lapa ho faly amin'ny Château de Chillon, sy ny natiora azo antoka fa tia mankafy ny farihy.
Chur ho Thusis Lamasinina
Day 3 – Zermatt – The Alpes, Soisa
Manokana fotoana in Soisa tsy nahita ny voajanahary hatsaran'ny The Alpes dia ho toy ny handeha ny Gourmet trano fisakafoanana ary tsy nandidy-kanina. Ary tsy misy antony ny manina izany rehefa misy fiaran-dalamby vao maraina Afaka hitondra anareo ho any Zermatt. avy eo, ny traikefa nahafinaritra tao an-Alpes dia afaka manomboka.
Misy be atao ao Zermatt raha Weather Tsara ampy. Tsy fahazoan-dalana ny 3 ora fitsangantsanganana manodidina ny farihy dimy, nanomboka tamin'ny Blauherd. Tena tsara tarehy sy be fitsangantsanganana fomba manomboka ny Nanketo Alpes eto traikefa.
Basel ho Interlaken Lamasinina
Geneva ho Zermatt Lamasinina
Bern ny Zermatt Lamasinina
Lucerne ny Zermatt Lamasinina
Day 4 – Zermatt – Indray andro 4 Of 10 Andro Switzerland Travel faritany haleha izy
Azonao atao ny maka ny andro fahefatra mba hijery Zermatt tanteraka, tahaka izany dia iray amin'ireo mahafatifaty Soisa tendrombohitra tanàna. Misy ony tsara tarehy mahita, ary ny Matterhorn mba hijery. Raha za-draharaha kokoa ianao mihaino tsara izay lazainy, azonao atao ny maka ny tolakandro mba hahita ny Charles Kuonen Suspension Bridge.
fa izay, ianao no mila mandeha any Randa mba, izay ny fitsangantsanganana ny tetezana manomboka. Fa momba ny ora 2-tongotra ho any amin'ny tetezana. Tsy mora ny lalana hamita, ary ny tetezana mihitsy dia tsy ho ny reraka am-po. Na izany aza, satria tsy hanenenana ny olana.
Zurich any St Moritz Lamasinina
Zermatt ny St Moritz Lamasinina
Basel ho Bern Lamasinina
Basel ny St Moritz Lamasinina
Day 5 – Matterhorn Glacier
Mba hiaina tanteraka ny Alpes, dia tokony hitondra ny fahafahana hahazo ny avo. Zermatt dia lehibe noho izany hanombohana, rehefa afaka mora foana na ny Matterhorn tonga Glacier Paradisa sy Gornergrat avy any.
Mila sasany manandratra ho tonga an-tampon-Matterhorn Glacier Paradisa na mitaingina lamasinina ho Gornergrat. samy ireo andro fitsangatsanganana manolotra fomba fijery mahafinaritra ny Alpes, ary misy ny sasany trandrahana hatao indray mandeha ianao ao, koa.
Basel ny Chur Lamasinina
Bern ny Chur Lamasinina
Turin ho Tirano Lamasinina
Day 6 – Schilthorn Soisa
Fa ny andro fahenina faritany haleha izy Soisa, tonga ny fotoana bebe kokoa ny sasany mba hahazo hevitra mahatalanjona avy Schilthorn. Misambotra ny tariby fiara mba Schilthorn avy Murren sy mankafy ny zava-drehetra dia tsy maintsy atolotra. A miodina trano fisakafoanana, be mijery sehatra, ary na dia Bond World afaka rehetra jerena ato.
Schilthorn dia ampy mba hameno ny manontolo andro, Fa raha mahatsiaro ianao sahisahy, jereo ihany koa Lauterbrunnen. Tena tongotra tsara tarehy amin'ny alalan'ny lohasaha feno tanàna kely fiatoana sy ny fomba fijery ny tendrombohitra riandrano.
Bern ny Interlaken Lamasinina
Lucerne ny Interlaken Lamasinina
Zurich any Interlaken Lamasinina
Day 7 – Jungfrau faritra
Day 7 dia ho tanteraka ny prolonging ny fitsidihana ny faritra Jungfrau sy hitandrina manadihady ny Alpes. Misy ny sasany malaza tongotra lavitra lalana azonao handray avy Grindelwald. Ny telegrama fiara afaka hitondra anareo ho any Voalohany Mountain, izay afaka haka iray amin'ireo maro tongotra misy lalana.
Ny iray amin'ireo malaza indrindra kosa dia isalasalana fa ny Bachalpsee Lake fitsangantsanganana, izay dia mandroso sy miverina izay maka manodidina 2 ora. Na izany aza, misy zavatra hafa be dia be ao amin'ny Voalohany, ka ho azo antoka no hivory hiaraka amin'ny faritra tsara.
Day 8 – Wengen
Ny tena ratsy noho ny fahavalo andro 10 Andro Soisa Travel trandrahana dia afaka ny ho Wengen, tendrombohitra kely iray tanàna. Raha ao amin'ny faritra, afaka hijery Mannlichen amin'ny alalan'ny fanaovana ny telegrama fiara ny tendrombohitra sy ny fihanihana ny lalana. Misy ny sasany atao hoe Mahagaga ireo, toy ny Royal Walk.
Ny Panorama Trail avy Mannlichen ho Kleine Scheidegg angamba no Toerana mahafinaritra indrindra iray. manolotra hevitra ny lohasaha ambany sy ny telon-tendrombohitra malaza - ny Jungfrau, Monch, ary Eiger. Avy Kleine Scheidegg, maka fiaran-dalamby niverina tany Wengen.
Close hatramin 'ny farany ny 10 Andro Switzerland Travel faritany haleha izy, ianao te-hanao ny lalanao niverina ho any an-tanàna. Fa ny andro faha-9, dia manoro fitsidihana Lucerne, tahaka ny tanàna ny tonga lafatra mba hijery an-tongotra. Araka izay rehetra tongotra lavitra, Izany dia midika hoe mandeha ho Fifaliana ho Mandehandeha eny eny an-dalambe mba hitady zavatra hita tahaka ny Fiangonan'i St. Leodegar, Museggmauer ary ny Lion Monument.
Lucerne manana riverfront lehibe sy tsara tarehy be ny mari-toerana. koa, Tena tsara izany fijanonana eo amin'ny nankany Zurich, izay ianao ho ampy ny fitsidihana.
Lyon any Geneva Lamasinina
Zurich any Geneva Lamasinina
Paris ho any Geneva Lamasinina
Lucerne ho any Geneva Lamasinina
Day 10 – Zurich sy ny andro farany ny 10 Andro Switzerland Travel faritany haleha izy
Ny andro farany dia tokony ho feno iray, ary Zurich dia tsara toerana mba handany azy amin'ny. Ampiasao ny fotoana mba hahita ny maro ara-tantara zavatra hita, toy ny fiangonana ny Grossmunster sy Fraumunster.
Zurich koa dia manana ny malaza miantsena eny an-dalana ny tolotra, ka ho azo antoka anao hividy zavatra amin'ny Bahnhofstrasse. Mandeha mamaky ny Old Town sy hankafy trandrahana eo anatrehanao lohan'ny an-trano indray.
Na inona na inona no mifidy ny hanao tany Soisa, ianao dia manana ny fotoana eo amin'ny fiainanao. Tsarovy fotsiny ny hanaovana drafitra ny asa atao, fitaterana, ary hitoetra tsara halavan'ny. Izany dia azo antoka fa ny fialan-tsasatra dia manahirana-maimaim-poana, ary tena miala voly, araka ny tokony ho.
Basel ho any Geneva Lamasinina
Lyon ny St Moritz Lamasinina
Zurich any Zermatt Lamasinina
Switzerland dia tsara tarehy tany lavitra rehetra no mila mahatsapa. Vonona ve ianao ho 10 Days Soisa Travel? Book ny fiaran-dalamby tapakila ankehitriny, ary manaiky ho ringana noho ny hatsaran-tarehy!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Andro Switzerland Travel faritany haleha izy” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-days-switzerland-itinerary%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Zavatra Hahalala Rehefa Driving In Eoropa